Madaxweyne Siilaanyo Oo Magcaabay Xisaabiye Cusub Kadib Markii Uu Xilka Ka Qaaday Xisabiyihii Hore Iyo Jawaabta Masuulka Xilka Laga Qaaday | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa digreeto Madaweyne oo uu shalay soo saaray xilkii kaga qaaday xisaabiyihii guud ee dalka Ibraahim Aadan Qaalib, waxaana lagu sababeeyay xil ka qaadistiisa inay cabasho badani ka timi shaqadiisii. Qoraalka
Madaxweynuhu xilka kaga qaaday xisaabiyihii dawlada waxa lagu sheegay in loo magacaabay xisaabiyaha cusub Maxamed Cabdi Badde, oo ah Agaasimihii Xisaabaadka wasaaradaha iyo kaantaroolka Miisaaniyada ee Madaxtooyada. Qoraalkaasi waxa lagu faray in labada masuul ay xilka ula kala wareegaan si deg deg ah.
Dhinaca kale, Xisaabiyihii hore Ibraahim Aadan Qaalib oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay xilka qaadistiisa, wuxuuna ku eedeeyay inuu ka dambeeyay Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Xubnaha Komishanka doorashooyinka oo uu sida uu sheegay uu ka diiday inuu usii daayo foojaro sharci darro ah. Laakiin waxa uu masuulka xilka laga qaaday xusay inuu la shaqayn doono xisaabiyaha cusub ee lasoo magcaabay.